Shilalekha » प्रचण्ड–माधव समूहको शक्ति प्रदर्शन फेरी भृकुटीमण्डपमै,कुन नेताले कहाँबाट नेतृत्व गर्ने ? प्रचण्ड–माधव समूहको शक्ति प्रदर्शन फेरी भृकुटीमण्डपमै,कुन नेताले कहाँबाट नेतृत्व गर्ने ? – Shilalekha
प्रचण्ड–माधव समूहको शक्ति प्रदर्शन फेरी भृकुटीमण्डपमै,कुन नेताले कहाँबाट नेतृत्व गर्ने ?
२६ माघ २०७७, सोमबार २०:५३
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)प्रचण्ड–नेपाल समूहले माघ २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नै सभा गर्ने भएको छ ।
यसअघि माघ ९ गते भृकुटीमण्डपमा नै सभा गरेको यो समूहले २८ गतेको सभा कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल थियो । माघ २८ गते यो समूहले पुल्चोक, माइतीघरमण्डला, केशरमहल, त्रिपुरेश्वर र जमलबाट जुलुस निकाल्ने रुट तय गरेको छ ।
पुल्चोकको जुलुसको नेतृत्व कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, रघुजी पन्त, प्रमेश हमाललगायत नेतृत्व गर्ने भएका छन् । यो जुलुस कुपण्डोल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्धरा पुगेर मुल जुलुसमा मिसिनेछ ।
त्रिपुरेश्वरबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, मुकुन्द न्यौपानेले नेतृत्व गर्नेछन् भने यो जुसल सुन्धरा पुगेर मुल जुलसमा मिसिनेछ । माइतीघर मण्डलाबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व अमृतकुमार बोहरा, गणेश शाह, गिरिराजमणि पोखरेल, भीम आचार्य, मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेलले नेतृत्व गर्नेछन् । यो जुलुस थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्धारा पुग्नेछ ।
केशरमहलबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, भीम रावल, शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गर्नेछन् । यो जुलुस दरबारमार्ग, तीनधारा पाठशाला, जमल, कमलाक्षी, असन, इन्द्र चोक हुँदै न्युरोड पुग्नेछ ।
जमलबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व भने लिलामणि पोखरेल लगायतले गर्नेछन् । यो जुलुस कमलादी, असन, इन्द्रचोक, जुद्धशालिक, न्युरोड हुँदै सुन्धारा पुग्नेछ । यसपछि सुन्धाराबाट निस्कने मूल जुलुसले सुन्धारा, बीर अस्पताल, जमल, घण्टाघर, बागबजार, पुतलीसडक पद्योदय मोड हुँदै प्रदर्शनीमार्गमा सभा हुने भएको छ ।
यो समूहले माघ २८ मा हुने जनप्रदर्शनलाई निर्णायक हुने दाबी गरेको छ । संसद् विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको यो समूहले पुस १४ र माघ ९ मा पनि काठमाडौं बृहत जनप्रदर्शन गरेको थियो ।